Apple yakazivisa maPhones matatu matsva pachiitiko chayo chakakosha musi wa12 Gunyana 2017: iyo iPhone 8, iPhone 8 Plus uye iPhone X (inonzi iPhone Gumi). Kana iwe uri kufunga nezve kukwidziridza foni yako, iwe ungangodaro unonetseka kuti ndeipi nyowani modhi inokodzera iwe zvakanyanya.
Kana iwe uchida skrini hombe, kanganwa iyo 8: uchafanirwa kuyera mutengo wakakwira weiyo iPhone X kutarisana neakakura uye anorema ruoko rweiyo iPhone 8 Plus. Kana iwe usiri kufarira pane zano rehombodo hombe, paruoko, saka unofanirwa kunge uri kusarudza pakati pe8 neX. Aya mamodheru maviri madiki uye akareruka kupfuura iyo Yakawedzera.
Neimwe nzira, iwe unogona kunge uchinakidzwa nehunhu hutsva hwe iPhone X asi uchishamisika kana iwe uchifanira kubhadhara kwakakomberedza £ 1,000, kana iyo iPhone 8 kana 8 Plus ichakupa izvo zvaunoda zvakanyanya.
Iwe unogona kuverenga yedu ongororo ye iPhone 8, iPhone 8 Plus, Uye iPhone X, asi mune ino chinyorwa tichayera mutsauko uripo pakati pemateru matatu aya kuti tikubatsire kusarudza kuti ndeipi yakakunakira iwe. Ukangosvika sarudzo, unogona kutenga iyo iPhone 8 modhi or iPhone X tungamira kubva kuApple, kana kufungidzira kutenderera kwedu kwe yakanakisa iPhone inobata.
iPhone X vs iPhone 8 pakatarisa
Ngatitangei nekuenzanisa nekukurumidza kweiyo iPhone 8, 8 Plus uye X. (Tichaenderera kumberi kune kwakadzama kutarisa misiyano inotevera.)
Colors Ndarama, sirivheri, Space Grey Ndarama, sirivheri, Space Grey Sirivheri, Space Grey
kuratidza 4.7in Retina HD (1334 × 750, 326ppi) IPS 5.5in Retina HD (1920 × 1080, 401ppi) IPS 5.8in Super Retina Ratidza (2436 × 1125, 458ppi) OLED
chengetedzo 64GB / 256GB 64GB / 256GB 64GB / 256GB
Pamberi kamera 12Mp, f / 1.8, 5x digit zoom, Quad-LED flash 12Mp wide-angle, f / 1.8, OIS + 12Mp telephoto, f / 2,8, Optical zoom, 10x digital zoom, Portrait Lighting, Portrait Mode, quad-LED flash 12Mp wide-angle, f / 1.8, OIS + 12Mp telephoto, f / 2.4, OIS, Optical zoom, 10x digital zoom, Portrait Lighting, Portrait Mode, quad-LED flash
Front kamera 7Mp FaceTime HD, f / 2.2, 1080p vhidhiyo 7Mp FaceTime HD, f / 2.2, 1080p vhidhiyo 7Mp FaceTime HD, f / 2.2, 1080p vhidhiyo
Video kurekodi 4K pa24 / 30 / 60fps, 1080p slo-mo pa240fps 4K pa24 / 30 / 60fps, 1080p slo-mo pa240fps 4K pa24 / 30 / 60fps, 1080p slo-mo pa240fps
Biometric kuchengetedzwa Bata ID Bata ID Face ID
Kuchaira pasina waya? Ehe Ehe Ehe
miganhu 67.3 × 138.4 × 7.3mm 78.1 × 158.4 × 7.5mm 70.9 × 143.6 × 7.7mm
uremu 148g 202g 174g
mutengo £ 699 / £ 849 ($ 699 / $ 849) £ 799 / £ 949 ($ 799 / $ 949) £ 999 / £ 1,149 ($ 999 / $ 1,149)
Tenga SIM-yemahara Kubva kuApple Kubva kuApple Kubva kuApple
Tenga pane chibvumirano Kubva kuCarphone Warehouse Kubva kuCarphone Warehouse Kubva kuCarphone Warehouse
Mafoni paakatanga kutengeswa, izvi zvinogona kunge zviri izvo zvinosarudza: iyo iPhone 8 uye 8 Plus yakatanga kutengeswa zvisati zvamboita neX X uye pakanga paine zvakawanda zvekutengesa.
Iyo iPhone X haina kuramba ichitengeswa kusvika Chishanu 3 Mbudzi, uye payakadaro, masheya akapera nekukurumidza, aine anotarisirwa mazuva ekuendesa anotambanuka kusvika kumazuva, kana kunyangwe mavhiki, gare gare.
Iye zvino iwe unogona kutarisira kuuya kwemazuva ano kweiyo iPhone X, kana kunhonga imwe muApple Store nhasi. Izvo zvakafanana zvinoenda kune iPhones 8 uye 8 Plus. Tarisa uone gwara redu kune sei kuwana iPhone X pano.
Mutengo weiyi maPhones matatu ungangodaro wakakamura zvikuru uye inogona kunge iri bhajeti rako rinoita sarudzo.
Nekudaro, ziva kuti nepo paine kusiyana kukuru pakati pemitengo kana iwe ukatenga ruoko rwako zvakananga kubva kuApple, kana uchiparadzira mubhadharo pane makore maviri-nguva nefoni yako yerunyararo mutsauko unogona kunge uchingova mapaundi mashoma pamwedzi.
Ziva zvakare kuti pane mutsauko wakaderera mumutengo pakati peiyo 256GB shanduro yeimwe ruoko uye 64GB shanduro yemhando inotevera yepamusoro kumusoro. Semuenzaniso, iyo 256GB iPhone 8 Plus inodhura chete $ 50 yakaderera pane iyo 64GB iPhone X. Saka kusarudzwa kuri chaizvo pakati pemireza-chikepe runhare nenzvimbo yakawedzerwa.
Iyo iPhone 8 inowanikwa pano uye inodhura £ 699 yeiyo 64GB vhezheni uye £ 849 yeiyo 256GB vhezheni. Kana iwe uri kutsvaga kutenga iyo iPhone 8 pachibvumirano, tarisa kutenderera kwedu kwe Best iPhone 8 deals.
Iyo iPhone 8 Plus inodhura £ 799 ye64GB kana £ 949 ye256GB.
Iyo iPhone X inodhura £ 999 yeiyo 64GB shanduro uye £ 1,149 yeiyo 256GB shanduro. Inowanikwa apa (kubva kuApple). Isu tine zvakare kutenderera kweakanakisa iPhone X madhiri pano.
Ndiyo £ 300 premium pane iyo 64GB iPhone X kana ichienzaniswa neiyo 64GB iPhone 8 uye isu tinofanirwa kubvuma isu hatina chokwadi kuti chakakosha icho chiratidzo-kumusoro. Iyo iPhone X iri £ 200 kupfuura iyo iPhone 8 Plus.
Sezvatakataura pamusoro, iyo iPhone 8 uye iPhone X zvese zviri zvidiki pane iyo iPhone 8 Plus (uye mamwe maEmamodeli Plus).
Heano maitiro ehukuru hweiyo iPhone X uye iPhone 8 kuenzanisa:
Iyo iPhone X inoyera 143.6mm ne70.9mm, uye iri 7.7m yakakora.
Iyo iPhone 8 ndeye 138.4mm ne67.3mm uye iri 7.3mm gobvu.
Iyo iPhone 8 Plus iri 158.4mm ne78.1mm uye iri 7.5mm gobvu.
Saka, sezvauri kuona, iyo iPhone 8 idiki uye yakaonda, asi zvishoma chete. Ndiwo mutsauko wehafu yesentimita pakureba uye kunyange wakaderera pane iwo upamhi. Uye nezve iyo hafu yemamilimita misiyano mukudzika, hatifunge kuti ichaonekwa.
Saka kana sarudzo yako yaizenge ichienderana nesaizi uye chimiro che iPhone saka pane shoma mutsauko pano.
Kana zvasvika kune uremu, zvisinei, mutsauko wacho wakakura.
Iyo iPhone X inorema 174 magiramu.
Iyo iPhone 8 inorema 148 magiramu.
Iyo iPhone 8 Plus inorema 202 gramu.
Saka pano iyo iPhone 8 inokunda - nemusiyano we26 gramu. Zviripachena kuti teaspoon yetsvigiri ingangoenzana nemagiramu mana, saka iri pamusoro pe4-6 mashupuni eshuga, anokwana mukombe unotapira kwazvo wetii, asi isu tinokahadzika kuti ichakuremera zvese izvozvo.
Iyo iPhone 8 Plus iri yakati kurei uye inorema - yaimbove iwo mutengo waunobhadhara kune yakakura screen ... kusvikira iyo iPhone X yatanga.
Kana iri diki iPhone yauri kutsvaga, hapana musiyano wakakosha pano. Hazvina kukodzera kukonesa iyo iPhone X pamusoro pemamirimita mashoma muhukuru, uye iine chete magiramu makumi maviri nematanhatu pakati pavo, iyo iPhone X haizombonzwa kunetseka kana ichienzaniswa neiyo yakareruka iPhone 26.
Kana uchinyatsoda iPhone diki pane imwe iPhone yaungafunga nezvayo. The iPhone SE ndiyo Apple diki pane Apple:
Iyo iPhone SE inoyera 123.8mm ne58.6, uye iri 7.6mm yakakora.
Inorema 113 magiramu.
Tinokurudzira kuti umbomira kutenga imwe yacho, zvakadaro, sezvatinotarisira Apple kuti igadzirise mukati megore ra2018. Verenga: iPhone SE 2 kuburitsa zuva.
Svondo reku screen
Iyo iPhone X uye iPhone 8 inogona kunge yakafanana kana ichisvika kuhukuru uye uremu asi kune mumwe musiyano muhombe: kukura kwesero.
Iyo iPhone X ine 5.8in Super Retina HD inoratidzira.
Iyo iPhone 8 ine 4.7in Retina HD inoratidzira.
Iyo iPhone 8 Plus ine 5.5in Retina HD inoratidzwa.
Kana zvasvika kuhukuru hwekutarisira zvinoita sekunge pane akajeka anokunda pano, iyo iPhone X. Zvisinei kuti chiyero che5.8in diagonal chinonyengera.
Kana iwe ukayera kukwirira kwechidzitiro uye upamhi mhedzisiro yacho ndeiyi:
iPhone X skrini ndeye 62 x 135mm.
iPhone 8 Plus skrini ndeye 69 x 122mm.
iPhone 8 skrini ndeye 59 x 105mm.
Saka, pane nyika yemusiyano pakati peiyo iPhone 8 uye iyo iPhone X skrini, asi maererano ne iPhone 8 Plus, pane imwe 13mm yakawedzera pakukwirira pane imwe foni uye imwezve 7mm yakafara pane imwe.
Kunze kwekunge iyo yakawedzera 13mm haina kunyatsoita.
Kana iwe ukasabvisa iyo X X notch (iyo nzvimbo iri pamusoro pechiratidziro iyo inovhara Face ID kamera) kubva pachiyero ichocho saka iyo skrini iri yakanyatsoita 62mm kuyambuka x 130mm pasi (saka 8mm yakareba kupfuura iyo 8 Plus). Asi ichiri chakakura kupfuura iyo iPhone 8 Plus skrini, uye zvichipiwa kuti nharembozha pachayo idiki, ndicho chinhu chekupemberera.
Kunze kwekunge, nekuti iyo iPhone 8 Plus iri hombe ruoko, iyo skrini inogona kunge yakafara. Uye kune zvakawanda zvezvikonzero nei iyo yakafara skrini inogona kubatsira (kwete zvishoma kana iwe uri kushanda pane iyo Tsamba gwaro mune yemufananidzo mode).
Asi kune vazhinji iwo iPhone Plus akateedzana akanyanya kukura uye anonetsa kubata zvakanaka. Sarudzo haisi yezve saizi yesikirini, asi zviri pamusoro pechibayiro chakawanda chawakagadzirira kuita kuti utore skrini hombe.
Iyo iPhone 8 Plus ine hombe screen, asi iri hofoni hombe uye inogona kunge isina kugadzikana kubata.
Iyo iPhone X ine yakarebesa skrini, asi haina yakafara kupfuura iyo iPhone 8.
Isa nenzira iyoyo, zvakaoma kukurudzira imwe foni pamusoro peimwe maererano nesaizi yesikirini. Zvinoenderana nezvaunoda.
Mubvunzo wekutanga ndewe: Iwe unoda here skrini ye iPhone iyo yakareba, kana iyo iPhone skrini iyo yakafara?
Mubvunzo wechipiri ndewekuti: Iwe uchave uchishandisa yako iPhone kuti uone mafirimu uye TV inoratidzwa yakadururwa mu16: 9 factor ratio? Nekuti nepo iPhone 8 uye 8 Plus ari 16: 9 skrini, iyo iPhone X skrini ndeye 19.5: 9 skrini uye semugumo unogona kupedzisira wasarudza kuona mafirimu mune yetsamba bhokisi fomati pane yezvirimwa zvinhu.
Mubvunzo wechitatu: Pane chero nyaya iyi kana uchingoda ruoko diki here?
Kana iwe uchida skrini hombe chaizvo pane yako yakazara-skrini iPhone iwe unogona kuve wakachenjera kumirira kusvika gare gare muna 2018, kana zvichitaurwa Apple inogona kusuma iyo iPhone X Plus.
Pane chimwe chinhu chingataure nezvekuratidzwa pane iyo iPhone X - iyo OLED skrini iyo Apple iri kudaidza Super Retina kuratidza.
Iyo iPhone X inoratidzira ine TrueTone, 2436 × 1125-pixel resolution pa458ppi, ine 1,000,000 1, XNUMX: XNUMX mutsauko.
Iyo iPhone 8 inoratidzira inopa iyo Retina Ratidza, 1334 × 750-pixel resolution pa326ppi, uye 1400: 1 mutsauko weyero.
Iyo iPhone 8 Plus inoratidzira iRetina Ratidza, 1920 × 1080 pixel resolution pa401ppi, uye 1300: 1 musiyano weyero.
Ino inguva yekutanga iPhone kuwanikwa neOLED skrini. MaOLED ane akawanda akanaka maficha anosanganisira mhedziso vatema - saka izvo 1,000,000: 1 mutsauko chiyero - uye yakafara yekuona kona.
Patakashandisa iyo iPhone X takafadzwa. Makara aive akashinga uye akajeka, uye vachena vacho vachinyanya kuva vechokwadi kuhupenyu, zvakare zvimwe mumvuri wakaita yero kupfuura pane iyo iPhone 8 Plus, iyo yaiita kunge ine bhuruu. Mukuenzanisa neiyo iPhone 8 Plus nzvimbo dzakasviba dzaive dzakajeka uye dzakajeka. Izvi ndezvekutenda kune chimwe chikamu cheiyo skrini - HDR (yakakura simba renji) - iyo inowedzera huwandu hweese ari maviri mutsauko uye ruvara.
Patakatarisa matema akasviba mumafirimu maive nekujekeswa kukuru pane iyo iPhone X pane pane mamwe mafoni epa iPhone.
Dambudziko nemaOLEDs ndeekuti vanogona kutambura kubva kuchiso-kupisa - 'mweya' mufananidzo unosara pachiratidziri (chimwe chinhu chiri kutambudza Google Pixel 2). Kuchinja kwemavara kunogona zvakare kuve dambudziko. Apple inoti yatora matanho ekudzivirira izvi.
Iyo OLED skrini pane iyo iPhone X kuona kuona, kunyanya nekuda kwekuisirwa kweHDR. Asi isu tinonzwa kukura kweiyo skrini ndiyo isiriyo factor ratio yekunyatsonakidzwa nemabhaisikopo - ndipo panogona kubatsira HDR zvikuru. Isu tinotyawo zvishoma pamusoro pedzimwe nyaya idzo maOLED anozivikanwa.
Kana zvasvika kune processor hapana chaicho musiyano wakakura pakati pemafoni matatu, sezvo yega yega ichishandisa Apple's A11 Bionic system-on-chip.
Muchokwadi, kana zvasvika pakuongororwa kwebvunzo, takawana kuti Geekbench scores yakanga yakafanana: isu takawana kuti iPhone 8 Plus uye iPhone 8 yakakwira zvishoma kupfuura iyo iPhone X patakaedza.
Iine akawanda-epakati ezviuru akakomberedza 10,100 mucherechedzo - kanenge kaviri zvakatorwa neiyo iPhone 7 Plus - uyezve kupfuura makwikwi (iyo Samsung Galaxy Note 8 zvibodzwa zvakapoterera 6,471 nepo Google Pixel 2 zvibodzwa 6224) tinofunga kuti chero ipi iPhone yaunosarudza, iyo processor kumhanya hakuzonyadzise.
Mafoni ese matatu ane 12Mp kamera kumashure asi pane zvimwe zvakakosha misiyano.
Iyo iPhone X uye iyo iPhone 8 Plus vane maviri makamera kumashure. Iyo af / 1.8 aperture wide-angle uye f / 2.4 aperture telephoto kamera iyo inosangana kugadzira iyo inoshamisa portrait shots ine yakasviba yakajeka iyo iyo mafoni anogona kutora. Iyo iPhone X uye Plus zvakare ine Optical zoom uye inopa digital zoom kusvika kusvika 10x.
Iyo iPhone 8 inongova iine imwe 12Mp kamera kumashure neaf / 1.8 aperture, saka haigone kutora fancy portrait shots, uye zoom yayo yedhijitari inoenda ku5x.
Mumwe musiyano ndewekuti kumashure-akatarisana ma lens pama iPhone X ese maviri ane maziso ekugadzika mufananidzo (OIS), iyo inofanirwa kuenzana nekuita yakaderera-mwenje kushanda, nepo chete iyo yakakura-kona lens pa iPhone 8 Plus ine izvi.
Muzviongorori zvedu zvemifananidzo takaona kuti mifananidzo yem macro yakatorwa neApple X yaive nani pane ayo ari pa iPhone 8 Plus, uye iyo yakawedzera OIS ingangove chikonzero cheizvozvo.
Iko zvakare kune tekinoroji nyowani muA11 Bionic chip iyo inobvumidza Apple kuti iende nhanho kumberi neiyi pikicha yekufotera muiyo iPhone X uye 8 Plus. Iyo 'Neural Injini' mune iyo chiratidzo chiratidzo processor inogona kukubvumidza iwe kuti uchinje mamiriro emwenje mushure mekutora mufananidzo.
Portrait Mwenje sarudzo dzinosanganisira Natural Chiedza, Studio Chiedza, Contour Chiedza, Stage Mwenje, uye Stage Mwenje Mono. Idzi sarudzo mbiri dzekupedzisira dzakasvibisa kumashure nepo dzimwe sarudzo dzichichinja mashandisiro anoita mwenje kumeso kwako. Parizvino chimiro chiri mubeta - uye hazviwanzo kupa mhinduro dzakanakisa, asi ndiyo nzira inonakidza yekumisikidza yakatove yakanaka portrait style shots.
Isu tinoda mifananidzo yekupfura yatinotora neyedu iPhone 7 Plus saka isu tinokurudzira kukurudzira kutora foni neiyo kugona.
Kana iwe ukatora pfuti zhinji dzevanhu uye uchida kugadzira iyo bokeh mhedzisiro isu tinofunga iwe ungade ichi chimiro cheiyo iPhone X. Kana iwe usingazive kuti chii chinonzi bokeh mhedzisiro isu tingangodaro titaure kuti iwe don ' ndinonyatsoida.
Kutendeuka kune kamera pamberi peiyo iPhones. Iyo kamera ye "selfie / FaceTime kamera kumberi 'kweX X yakasiyana neiyo inowanikwa pane iyo iPhone 8 uye 8 Plus.
Pane iyo iPhone 8 mhando iwe unowana 7Mp FaceTime HD kamera ine Retina Flash (yakafanana pane iyo iPhone Plus) asi pane iyo X X kune 7Mp TrueDepth pamberi kamera ine Portrait mode uye Portrait Lighting.
Iyi TrueDepth kamera ndiyo inoita kuti Face ID igoneke - sekutsanangura kwatichaita gare gare.
Panyaya yekutora mapikicha, iyo TrueDepth kamera kumberi kweX X inogona kutora izvo Apple iri kudaidza Portrait Mode Selfies. Mune mamwe mazwi, iyo kamera yekumberi inotarisana inogona kutora mapikicha ane rakapinza kumberi uye nehuremu hwakasarudzika kugadzira yakafanana bokeh mhedzisiro iyo macamera maviri kumashure kwe iPhone X uye Plus anogona kubudirira.
Kana zvasvika pamamera kamera iyo X inokupa iyo yekuwedzera mufananidzo kusimbiswa uye Portrait Mode Selfies.
Iyo iPhone 8 Plus inodarika kukwana kana iwe usiri kuda kushandisa mazuva ako kutora selfies (uye isu hatigone kubatsira asi kufunga kuti vanhu vanozviita vese vari kushandisa Snapchat zvakadaro).
Nekudaro, iyo kamera mune iyo iPhone 8 ichiri yakanaka, saka, kana usiri kunetsekana nekuwedzeredzwa kwepamberi-yakatarisana nePortrait Mode, iyo iPhone 8 inopfuura zvakakwana.
Bhatani rekumba rakarasika
Pane musiyano mukuru pakati pe iPhone X ne iPhone 8 uye 8 Plus uye inogona kunge iri chinhu chinokufuratira iPhone X zvachose.
Iko kushambadzira-kwekutora iyo yakakura skrini pane iyo iPhone 8 ndiko kupera kweImba Bhatani. Ehe, iyo yekutengesa Bhatani Bhatani - zvine nharo kunge yakawanda chikamu cheiyo iPhone's iconic dhizaini seye clickwheel yaive paPod - yaenda.
Kubviswa kweiyo Bhatani Rekumba kunoreva kuti Apple yaifanira kuita shanduko kune iyo iPhone interface. Saka kana iwe waizotenga iPhone X waizofanira kudzidza nzira nyowani yekufambisa iyo interface. Unogona kujairana neizvi nekukurumidza, kana kuti ungazviona uchishushikana. Zvinoenderana nekuti unofarira kubvuma shanduko sei, uye kuti intuitive nzira itsva yekuwirirana neiyo iPhone iri sei.
Tine chinyorwa chinotsanangura maitiro ekushandisa iyo iPhone X itsva, uye zvese zviitwa zvitsva zvauchadzidza. Patakashandisa iyo iPhone X kwenguva pfupi yataiwana takakurumidza kujairana nemaitiro matsva.
Takaona kuti zvaive nyore kwazvo kujaira kuita kwakasiyana siyana pa iPhone X kupfuura zvataitarisira, asi tichiri kunzwa kuti Kumba bhatani raive nemusoro uye zvinoshungurudza kunzwa kuti unofanirwa kuita mamwe matanho ekuita zvinhu. iyo yaimbotora chete bhatani bhatani.
Chiso ID v Kubata ID
Iko kune kumwe kumwe shanduko semhedzisiro yekushaikwa Kumba Bhatani. Bata ID, Apple yeminwe yekuziva sisitimu yekuchengetedza foni yako kuitira kuti iwe wega ugone kuivhura, uye ichikubvumidza iwe kubhadhara zvinhu uchishandisa Apple Pay, yakatsiviwa neFace ID.
Tinonzwa tichirwadziwa nekurasikirwa kweTouch ID pane iyo iPhone X. Takanakidzwa nekureruka kwekukwanisa kusunungura foni yedu nekubata chete Bhatani repamba, uye takanakidzwa nekukwanisa kushandisa yedu iPhone kubhadhara zvinhu muzvitoro. NeFace ID iwe uchavhura foni yako nekuitarisa. Verenga yedu yekuenzanisa kudzokorora kwe Chiso ID vs Kubata ID.
Pane kunetseka kwakawanda kuri kukomberedza pawebhu nezve kuvimbika kweFace ID uye kuti yakachengeteka zvakadii.
Demo raApple pachikuva panguva yeshoko rakakura harina kuita zvishoma kugonesa vanhu nezvekuvimbika kwaro - naro richiratidzika kunge rakundikana (kunyangwe Apple iri kuti haina kunyatso kumisikidzwa pane kuti itadze kuziva muratidziri).
Kubva pakatanga iyo iPhone X pakave nezviitiko zvakasiyana zvevanhu vachikwanisa kuvhura mumwe munhu iPhone X - kazhinji akafanana mapatya kana nhengo dzemhuri, asi kwave kune zvakare ngano dzevanhu vanovhura iPhone X mamodheru nemasiki. Isu tinofukidza zvimwe zvezviitiko izvi muchinyorwa chino nezve matambudziko neiyo iPhone X.
Apple inoti Face ID yakachengeteka kupfuura Kubata ID. Sekureva kwaApple, pane imwe chete mumamirioni mukana wekuti Face ID inobvumidza mumwe munhu kuvhura yako iPhone - kuti mumwe munhu anofanira kunge ari doppelgänger wako.
Chaizvoizvo, Chiso ID chakachengetedzeka kubva kune tsotsi nekuti ivo havaite senge iwe - asi kana ari munin'ina wako waunoda kuchengeta zvakavanzika kubva ipapo ungangodaro usina rombo rakanaka.
Apple inokurudzirawo kuti vana vari pasi pemakore gumi nematatu havafanirwe kushandisa Face ID sezvo zviso zvavo zvichiri kukura uye “zviso zvakasiyana zvinogona kunge zvisina kunyatso kukura”.
Kubata ID, kune rumwe rutivi, ine imwe mu50,000 mukana wekubirwa nemumwe munhu zvigunwe. (Zvinotirova kuti zvingave nyore kuwana munhu airatidzika semumwe munhu pane kuwana munhu ane chigunwe chakafanana newe kana iwe wanga uchitsvaga kubira kupinda mufoni yavo).
Vanhu vanovhara kumeso kwavo, senge burkas, niqab kana balaclava mupfekeri, havazokwanise kushandisa Face ID, kunyangwe kana uine ndebvu, ngowani kana magirazi Face ID inofanira kushanda.
Takawana Face ID yashanda chaizvo, kunyangwe pakutanga takawana yatadza kutiziva pane zvishoma nguva. Nekudaro, iko kwekutadza kwekutanga kwaive kuri kwekutarisana neFace ID tichidzidza isu, uye sekuuya kwatakajaira kutiziva isu mumwenje dzakasiyana siyana uye kana kana isina magirazi uye nezvimwe, zvakafinha kuvhura iyo iPhone pese paida.
Chinhu chekupedzisira kucherechedza pano - kana zvasvika pakuchengetedza musiyano uripo pakati peFace ID neTouch ID haina basa nekuti chero munhu anogona kuvhura yako iPhone kana aine pasipoti yako. Saka kana iwe usina pasipoti yakachengeteka - iyo passcode isiri 000000 kana 123456 - saka unogona zvakare kusiya yako iPhone isina kukiyiwa.
Pane zvimwe zvakanaka kuFace ID. Haumbonzwa sekunge uri kufanira kuvhura foni yako, uye kutema pamasevhisi angadai akamboshandisa Kubata ID, ikozvino shanda neFace ID, saka kuwana yako banking app pafoni yako kunogona kukurumidza, kana yako iPhone X ikaziva kuti ndiwe.
Asi zvinogona kushungurudza kuzvishandisa kana mushure mekuti iPhone yako yaona iwe zvichiri madikanwa kudzvanya bhatani reSide kuti uite kubhadhara.
Ndiwo mutsauko mukuru ungazoita mutsauko mukuru kwauri. Asi pane mimwe mishoma misiyano iripo pakati peiyo iPhone 8, 8 Plus uye iPhone X maererano neya specs.
Kune zvimwewo zvinhu zvishoma zvakaenzana sezvaticharatidza pazasi.
iPhone X: Space Grey / sirivheri
iPhone 8: Goridhe / sirivheri / Space Grey
iPhone 8 Plus: Goridhe / sirivheri / Space Grey
Nhare 8 Plus: 64GB / 256GB
iPhone X: Yakatemwa IP67 pasi peIEC standard 60529
iPhone 8: Rated IP67 pasi peIEC standard 60529 (SAME)
iPhone 8 Plus: Yakatemwa IP67 pasi peIEC standard 60529 (SAME)
iPhone X: A11 Bionic chip ine 64-bit zvivakwa, M11 inofamba koprocessor
iPhone 8: A11 Bionic chip ine 64-bit architecture, M11 inofamba koprocessor (SAME)
iPhone 8 Plus: A11 Bionic chip ine 64-bit zvivakwa, M11 yekufamba koprocessor (SAME)
iPhone X: Inogara kusvika maawa 2 akareba kupfuura iPhone 7
iPhone 8: Inopedzisira yakafanana neye iPhone 7
iPhone 8 Plus: Inopedza inenge yakafanana ne iPhone 7
iPhone X Wireless kuchaja (inoshanda neQi charger)
iPhone 8 Wireless charging (inoshanda neQi charger) (SAME)
iPhone 8 Plus Wireless kuchaja (inoshanda neQi charger) (SAME)
Tasvetuka pamusoro pechaji isina waya inova chinhu chitsva cheiyo iPhone 8, 8 Plus uye iPhone X. Hatina chokwadi nezvekukosha kwechinhu icho, asi kana chiri chinhu chaunokwezva, zvakakodzera kuti usimbise izvozvo chimiro chinowanikwa pane ese ari mairi iPhone 8 uye iPhone X saka haisi chikonzero chekusarudza imwe foni pamusoro peimwe. Iwe unogona kuwana isina waya kuchaja pane yekare iPhone ikozvino kana iwe uchinyatsoda, verenga izvi kuti uone kuti sei: Maitiro ekuti uwane waya kuchaja pane iyo iPhone.
Iyo iPhone X ine mashoma maficha atinoda, senge Portrait Mode selfies uye yakagadziridzwa Portrait Mode pane yekumashure kamera. Zvimwe hazvishamise: iyo hombe skrini pane diki ruoko inonzwika zvikuru, semuenzaniso, asi isu tinonzwa kuti yakaparadzwa zvishoma neiyo notch uye nenyaya yekuti haina kunyatso kukura kupfuura iyo pane iyo iPhone 8.
Uye zvakare, kubviswa kweBhatani reKumba kunoreva kuti haungodi chete kuti udzidze zvakare chimiro, asi hauchakwanise kushandisa Kubata ID. Isu tinoona izvi zvakanyanya-kuisa, asi fungidzira kuti ndicho chinhu isu tese chatinofanira kudzidza kugara nacho, nekuti mukana ndewekuti ramangwana iPhones ichatora ino yekumucheto-kumucheto skrini uye Chiso ID.
Parizvino, isu tingati enda kumberi uye utenge iyo iPhone 8 Plus kana iwe uchida kushandisa yakavandudzwa Portrait Mode, kana kungoomerera neiri yakachipa iPhone 8 uye unakirwe neImba Bhatani iwe uchiri kugona. Ndiko kunze kwekunge iwe uchida kuve mumwe wevanokudzwa uchishandisa iyo nyowani iPhone X uye kodzero dzese dzekuzvikudza dzinosanganisira Uye isu tinoziva vanhu vakati wandei vanokwana muchikamu icho.
Ndeipi iPhone yakandinakira? iPhone X vs 8 vs 8 Plus vs 7 vs 7 Plus vs 6s vs 6s Plus vs SE
iPhone kamera matipi uye madhiri anotungamira: Tora mafoto makuru ne iPhone 8 Plus uye pazasi